ब्रसेल्स आक्रमण र आतंकवाद नियन्त्रणका चुनौती | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
ब्रसेल्स आक्रमण र आतंकवाद नियन्त्रणका चुनौती
अमर ओली “अग्नि” | 359 Views | Published Date : 27th March 2016 |
युरोपीयन मुलुक बेल्जीयमको राजधानी बस्रेल्स स्थित विमानस्थल र मेट्रो स्टेशनमा गत मार्च २२ तारिकका दिन आतंकवादी आक्रमण भयो । झन्डै एक वर्ष अगाडी नोभेम्वर १३, २०१५ का दिन अर्को युरोपीयन मुलुक फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा पनि यस्तै आतंकवादी हमला भएको थियो । यी दुई घटना केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन, फरक फरक समयमा भएका यस्ता आतंकवादी आक्रमणका कारण विश्वका विभिन्न देशहरुमा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ, थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ, अथक मिहिनेतवाट निर्मित विकासका पूर्वाधारहरु नष्ट भएका छन् । यसवाट के पुष्टि हुन्छ भने विश्वका विकासशिल राष्ट्रहरुका लागि समेत आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु निकै चुनौतिको विषय बनेको छ ।
आतंवादलाई विभिन्न किसिमले परिभाषीत गरिएको पाईन्छ । यो मानव सभ्यता वा मानवता विरुद्ध गरिने जघन्य अपराध हो । आतंकवादी गतिविधि कुनै देशको वैध व्यवस्थाका विरुद्ध हुने हिसांत्मक गतिविधि वा कारवाही हो । राजनीतिशास्त्रका प्रोफेसर कारपेत्सका अनुसार आतंकवाद हत्या, हिसाको प्रयोग, फिरौती अथवा अन्य मागका लागि मानिसहरुलाई बन्धक बनाउने र स्वतन्त्रताको बलपूर्वक अपहरण गर्न विशेष संगठन वा गुट बनाउनेतर्फ लक्षित अन्र्तराष्ट्रिय अथवा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा प्रेरित राष्ट्रिय घटना अथवा गतिविधि हो । खासगरी राजनीतिक, धार्मिक वा अन्य कुनै प्रकारको उद्देश्य प्राप्तीको लागि हिंसा वा यसका विभिन्न स्वरुपको यसमा प्रयोग गरिन्छ । यस्तो कार्य सामाजीक असमानता र विभेद विरुद्ध संघर्ष गर्ने समूह, निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक दल, धार्मिक अतिवादी समूह, राज्यको मूलधार रहेका पार्टी वा व्यक्तिबाट समेत भए गरेको पाईन्छ । यसलाई मूल रुपमा राज्यविरुद्ध गतिवीधी मानिन्छ । सन् १७९३÷९४ तिर फ्रान्सेली सरकारले सामाजिक हित प्रतिकुल हुने हिंसात्मक गतिविधीलाई राज्य आतंक ९क्तबतभ त्भचचयच० को रुपमा लिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न दस्तावेजहरुमा समेत आतंकवादको परिभाषा गर्न कठिन रहको कुरा स्वीकार गरिएको छ । विभिन्न अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने आतंकवादलाई अपराधीक ९अचष्mष्लब०ि र राजनीतिक ९उयष्तिष्अब०ि गरी दुई रुपमा लिने गरिन्छ । न्यिदब ित्भचचयचष्कm नामक पुस्तकका लेखक जेम्स एण्ड विरेन लुजले विश्वमा आतंकवाद शुरुवात आतंकवादी आक्रमण देखि नभएर विश्वमा देखा परेको शितयुद्ध ताकाको अवस्था देखि शुरुआत भएको उल्लेख गरेका छन् । विश्वमा आतंकवादका अहिले विभिन्न स्वरुपहरु रहेका छन् । १. देशको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने गरी संगठित समूहद्वारा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने कार्य । २. देशभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरुलाई आफु अनुकुलको उद्देश्य प्राप्तीका लागि अपराधी र हिसांत्मक क्रियाकलापद्वारा डर त्रासमा राख्ने कार्य । यस्तो कार्यलाई राजनीतिशास्त्रमा राजनीतिक आतंकवाद ९उयष्तिष्अब ितभचचयचष्कm० भनिन्छ । ३. सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्रविधिको दुरुपयोग गरी आर्थिक वा अन्य कुनै स्वार्थका कारण अन्य व्यक्ति, संस्था सूचनाको अवैधानिक भण्डारण ९कतयचबनभ० गर्ने कार्य । ४. आतंकवादले प्रश्रय पाउने गरी जनता र राज्यले समेत गतिविधी संचालन गर्ने कार्य । ५.अन्र्तराष्ट्रिय कानून र मान्यतालाई उल्लंघन गर्दै बहुराष्ट्रिय रुपमा राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा हिंसात्मक गतिविधि संचालन गर्ने कार्य आदि ।
समकालीन विश्वमा आतंकवादको समस्या यति धेरै बढ्नुका केही खास कारणहरु छन् । पहिलो कारणको रुपमा ऐतिहासिक अन्याय ९ज्ष्कतयचष्अब िक्ष्लवगकतष्अभ० लाई लिन सकिन्छ । कुनै पनि वर्ग, समुदायविरुद्ध लामो समयदेखि अन्याय र अत्याचार गरिन्छ भने त्यहाँ उत्पीडित समुदाय वा वर्गमा बदलाको भावना विकसीत हुन गई अन्ततः आतंकको स्वरुपमा विकसीत हुन पुग्दछ । युरोपमा सन् १९४८ मा यहुदीहरुले उनीहरुमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायका विरुद्ध संघर्ष गरी इजरायलको स्थापना गरेको देखिन्छ । दोश्रो कारण, जुन देशहरु लामो समयदेखि उपनिवेशमा रहे उनीहरुले स्वतन्त्रता प्राप्तीका लागि हिंसाको सहायता लिन पुगे । जसले गर्दा औपनीवेशिक कारणबाट आतंकवादको विकसीत हुन पुगेको देखिन्छ । तेश्रो कारण, आणवीक कार्यको विस्तार र अन्वेषण । यसका कारण विश्वमा आणवीक बम, हातहतियार लगायतका साधनको उपयोगमा वृद्धि भएको छ । यसले आतंकवादी गतिविधिलाई थप बढावा दिएको देखिन्छ । चौथो कारण, धार्मिक अतिवादले गर्दा विश्वमा विभिन्न धार्मिक र जातीय समूहबीच सद्भाव खलल हुन गई हुने सम्प्रदायीक द्वन्द्व र संघर्षले समेत आतंकवादलाई नै टेवा प्रदान गरेको छ । पाँचौ कारण, जब कुनै मुलुक तानाशाही शासकको हातमा पुग्दछ तब तिनिहरुले अन्याय र अत्याचार कायम गर्दैै अधिनायकवादी तवरले शासन सत्ता संचालन गर्दछन । त्यही अधिनायवादको प्रतिक्रिया स्वरुप आतंकवादको विकास हुन पुग्दछ । यसका साथै विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय गुटहरुको विकास, कम लागतको मोलतोलको हतियार विकसीत हुनु समेत आतंकवादी गतिविधि बढ्नुका थप कारणहरु हुन् । ब्रसेल्स आक्रमण सुरक्षा व्यवस्थामा भएको असावधानीका भएको आतंकवादी आक्रमण हो ।
बेल्जीयम युरोपको एक विकसीत मुलुक हो भने ब्रसेल्स त्यहाँको प्रशासनिक केन्द्र राजधानी हो । बेल्जीयमको आर्थिक उपार्जनको श्रोत मुलतः स्टील, रसायनीक उत्पादन लगायतका उद्योगमा आधारित छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादन पनि निकै माथी छ । बेल्जीमको राजधानी ब्रसेल्समा गरिएको आक्रमणले विश्व समुदायमा आतंकवाद नियन्त्रण थप चुनौति सिर्जना गरेको छ । विश्वका शक्ति सम्पन्न र सुरक्षीत मानिएका मुलुकमा यसरी गरिने श्रृखलावद्ध आतंकवादी आक्रमणले विश्व जगतलाई आतंकवाद नियन्त्रणको अन्र्तराष्ट्रिय अभियान एकजुट हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । प्रत्येक देशले आफ्नो आफ्नो मुलुकको समग्र सुरक्षा क्षेत्रलाई सुधार ल्याउदै थप मजबुद र बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
अहिले विश्वका प्रमुख आतंकवादी समूहहरुमा इस्लामीक स्टेट (इराक), बोको हराम (नाइजेरिया), हिजब्रुल्ला (लेवनान) , हमास (प्यालेस्टाईन), अल सबाब (सोमालीया) , मुस्लीम ब्रदरहुड (इजीप्ट) आदि रहेका छन् । यीनीहरुले आफ्नो गतिविधि निरन्तर रुपमा बढाईरहेका देखिन्छन् । यस्ता कार्य जुनसुकै स्वरुपमा भए पनि सकारात्मक मान्न सकिदैन् यस्ता आतंकतवादी गतिवीधीले विभिन्न असरहरु देखा पर्दछन् । यस्ता आतंकवादी समूहहरुले विश्वका शक्ति सम्पन्न मुलुकहरु माथि आक्रमण गर्ने गरेको पाईन्छ । अलकायदाले अमेरिकामा गरेको आक्रमण र इस्लामीक स्टेटले गत वर्ष फ्रान्समा गरेको आक्रमण यसका उदाहरण हुन् । आतंकवादी समूहबीच आतंकवादको जालो विस्तार गर्ने, उनीहरुकाबीच मोर्चावन्दी गर्ने, राज्यको सम्प्रभुता कमजोर पार्ने र उनीहरुले स्वार्थ अनुकुल गतिवीधी गर्ने कार्यहरु भैरहेको पाईन्छ । यसकारण आतंकवाद र यसबाट सिर्जित समस्या खास देश विशेषको मात्र नभएर विश्वव्यापी मुद्दा बन्न गएको छ ।
आतंकवाद नियन्त्रणका लागि प्रथमतः विश्व परिवेशमा विकसीत सुरक्षा चुनौतिलाई सही रुपमा आत्मसात गर्दै राजनीतिक रुपमा विकसीत हुने हिंसा र राज्य प्रतिकुलका गतिविधिलाई विश्लेषण गरी त्यसलाई समयमै नियन्त्रण र समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको पाटोलाई बलीयो बनाउने र सिमा सुरक्षा, अध्यागमन सुरक्षालाई व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । जहाँसम्म ब्रसेल्स विमानस्थलमा भएको आतंकवादी हमला छ, त्यसको मुख्य कारण नै त्यहाँको कमजोर विमानस्थल सुरक्षा प्रणाली हुन सक्छ । यसका लागि देशको सुरक्षामा खटिएकाहरुलाई प्राविधिक र व्यवसायीक रुपमा दक्षता प्रदान गर्नुपर्छ । आवश्यक उपकरण र हातहतियारको व्यवस्था गर्दै देशको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । एक देशमा आतंकवादी गतिविधि संचालन गर्ने र अर्को देशमा गएर शरण लिने कार्यको अन्त्य गर्न उनीहरुलाई कतै पनि सुरक्षित ठाउँ छैन भन्ने कुरा स्थापीत गर्न सक्नुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा आतंकवाद नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यसूचि संयुक्त राष्ट्र संघको २७ औ बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सन् १९७२ डिसेम्वर १८ को महासभाले प्रस्ताव नं. ३०३५ लाई ग्रहण गरी आतंकवाद नियन्त्रण सम्वन्धी एक अस्थायी समिति (Ad hoc committee) गठन गरी ३१ औ बैठकबाट पारित ग¥यो । आतंकवाद नियन्त्रणका लागि सार्कको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसका लागि सन् १९८७ नोभेम्वर ४ मा सार्क प्रादेशिक क्षेत्रीय महासन्धिको सार्क राष्ट्रहरुले अनुमोदन समेत गरेको छन् । सदस्य राष्ट्रहरुबिच भएको सुर्पुदगी सन्धीहरुलाई सबैले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसबाट कुनै पनि अपराधी एक मुलुकमा अपराध गरी अर्को मुलुकमा शरण लिन सक्दैन् ।
सन् २००४ मा म्याड्रीट, २००५ मा लन्डन, २०१५ मा पेरिस र २०१६ मा ब्रसेल्स आक्रमणसहीत युरोपमा ठुला चार ओटा आतंकवादी आक्रमण भएका छन् । यसबाट युरोपीयन मुलुकहरुका लागि उड्डन सुरक्षा, सिमा सुरक्षा, र समग्र आन्तिरक र बाह्य सुरक्षा मजबुत बनाउन थप चुनौति थपीएको छ । यसकारण सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत पार्दै आतंकवाद मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध भएकोले अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट भइ अपराध र आतंकवाद न्यूनिकरणको लागि हातेमालो गर्दे अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो नभएमा आतंकवादी गतिविधिमा पुनः वृद्धि भई विश्व समुदायकै लागि झन जटिल समस्या बन्न जानेछ ।
अमर ओली “अग्नि”